Interview with The Axe band
यो समयको उपज हो ।देशमा पहिला देखिनै राम्रो र विश्वासिलो कार्य भएको भए यस्तो सोचको विकास नै हुदैन थियो । नेपालका नेताहरु तथा राजनीतिक दलहरुले विकृती नगरिदिएको भए, नेताहरुले दिल्ली धाउनु पर्ने सिस्टम ... - The Axe band
नेपाली गीतसंगीतको क्षेत्रमा २० वर्ष पुरा गरिसकेको एक्सब्यान्डमा तीन सदस्य छन् ।एक्सब्यान्डलाई थ्री म्यान ब्यान्ड भनेर पनि चिनिन्छ । हाल ब्यान्डमा गायक शिव मुखिया, ड्रममा सुरेन्द्र श्रेष्ठ, गितारमा सगल राजभण्डारी छन्। शिव मुखिया म्युजिक क्षेत्रमा नै सक्रिय छन्, म्युजिक कम्पोज, एरेन्ज गर्नु, शब्द कोर्नु, यस्तै सुरेन्द्र श्रेष्ठको म्युजिक बाहेक ठमेलमा नमस्ते क्याफे छ यस्तै सुजल म्युजिक क्षेत्रमा नै सक्रिय छन् ।१९९३ मा पहिलो एल्बम 'धुवा' बाट सुरुवात गरेको ब्यान्डले बिभिन्न हिट गीत र एल्बम निकालि सकेको छ । एक्सब्यान्डले भर्खरै 'भडास' नामक एल्बम बजारमा ल्याएको छ । थप जानकारीका लागि अफिसिएल वेबसाइट www.theaxeband.com
सुनुवार नितेशसँग एक्स ब्यान्डका शिव मुखिया, सुरेन्द्र श्रेष्ठ, सुजल राजभण्डारीको छोटो कुराकानी
अहिले केमा बेस्त हुनु हुन्छ ?
अहिले नयाँ एल्बम प्रमोसन र म्युजिकल टुरमा बेस्त छौँ ।
भर्खरै तपाईहरुको एल्बम 'भडास' आएको छ, कस्तो एल्बम हो भडास?
भडास शाब्दिक रुपममा पहिले भन्दा केहि फरक मिश्रित गीतहरु भएको एल्बम हो, यसमा सम्पूर्ण नेपालीहरुको आक्रोस, धेरै वर्ष देखि थिचिएको कुराहरु, मायाप्रेम सम्बन्धित गीतहरु छन् । यसमा जम्मा १० गीतहरु समाबेश गरेका छौँ ।
भडासको 'सिमाना' नामक बोलको गीतको यति बेला निकै चर्चामा छ नि ?
हो यो गीत अहिले चर्चामा छ ।गीतमा पहिले देखिनै थाहा हुदै आए पनि हाल ठूलो समस्या बनेको नेपालको ७१ ठाउँमा सिमाना मिचिएको र एउटा राष्ट्रप्रेमी नेपालीले के गर्नु पर्छ ? भन्ने सन्देश दिन भएकाले यो चर्चामा छ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिभिजनको एनटिभी प्लसमा प्रशारण हुने एक म्युजिकल कार्यक्रममा सिमाना बोलको गीतलाई प्रतिबन्द लगाइएको कुरा सुनियो नि ? किन होला ।
हो यो सत्य हो,नेपाल टिभीमा मात्रनभै इमेज च्यानल र नेपाल वानमा समेतले यसलाई प्रशारणमा रोक लगाएको छ तर यसको कारण भने थाहा हुन सकेको छैन। कुनै पनि सञ्चार माध्यमले राष्ट्रका सवालमा उठाएका कुरा, राष्ट्रलाई फाइदा हुने कुनै पनि कुरा छ भने खुल्लारुपमा प्रशारण गर्नु पर्ने र सहयोग समेत गर्नु पर्ने हो तर त्यसको बाबजुत ट्याक्कै उल्टो भएकोछ ।तर अन्य सञ्चार माध्यमले तथा पब्लिकहरुले सहयोग गर्नु भएकोछ त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहान्छौँ ।
सम्पूर्ण नेपालीहरुले आफ्नो इतिहास, सिमाना, संस्कृतिका बारेमा थाहा पाउन पाउनु पर्छ तर खुलेआम एउटा राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले प्रसारणमा प्रतिबन्द लगाउनुमाको बढि जवाफदेहि हुनु पर्ने हो ? किन ।
यसको बारेमा अहिले हामीले यहि हो भनेर भन्न सक्दैनौँ । अहिले म्युजिक टुर, सो, इन्टरभ्यु आदि कारणले गर्दा अलि बेस्त भएकाले यो गीतलाई किन प्रतिबन्ध लगाईएको हो भन्ने बारे हामीले समय दिन सकेका छैनौँ ।अब केहि समय पछि यसको विषयमा ब्यापक रुपमा छलफल गर्छौँ ।
कसरी आयो यस्तो सोच देशको सिमानाको बारेमा गाउन ?
यो समयको उपज हो ।देशमा पहिला देखिनै राम्रो र विश्वासिलो कार्य भएको भए यस्तो सोचको विकास नै हुदैन थियो । नेपालका नेताहरु तथा राजनीतिक दलहरुले विकृती नगरिदिएको भए, नेताहरुले दिल्ली धाउनु पर्ने सिस्टम नभैदिएको भए, एकले अर्कालाई दोष मात्र दिने, नाटक मात्र गर्ने तर भित्रीरुपमा देशलाई रित्याउने जस्ता कार्य नभौदिएको भए आज यो भडास नै निस्कदैन थियो । यो कराडौँ नेपालीको आवाज हो ।त्यहि सोच प्रमुख हो ।
गीतमा देशको सिमानाका बारेमा निकै प्रष्ट रुपमा देख्न र सुन्न सकिन्छ, कति समय लाग्यो यसलाई तयार पार्न ?
यो तयार पर्न हामीलाई एक हप्ता लाग्यो । भिडियो तयार गर्न भने ग्रेटर नेपालले सहयोग गरेको हो । सबटाइटल भने देव सुनुवारको हो ।
तपाई त स्थापित गायक, व्यावसायीक हिसाबले नेपाली गीतसंगीतका क्षेत्रको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?
व्यावसायीक रुपमा धेरै नै राम्रो छ अहिले, मेहेनत गर्नु पर्छ, प्रतिस्पर्धा धेरै छ, उछिन्न सक्नु पर्यो ।
नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा लाग्नु भएको कति भयो ? तपाईहरुको पहिलो गीत याद छ ? अहिले त्यो दिनलाई सम्झदा कस्तो लाग्छ ?
हामी नेपाली गीतसंगीतको क्षेत्रमा लागेको २० वर्ष भैसक्यो । अँ ! याद छ, 'पल्लो डाँडामा बसेकि कान्छी।' । १९९३मा रेडियो नेपालबाट प्रशारण हुने रंगीन लहर कार्यक्रममा जुन पाण्डव सुनुवारले चलाउनु हुन्थ्यो । त्यो दिन सम्झँदा अहिले कथा जस्तो लाग्छ । त्यो वेला रेडियोमा रेडियो नेपाल ‍र टेलिभिजनमा नेपाल टिभी मात्र थियो । हामीले एउटा गीत ३ मिनेट बज्न १ महिना कुर्नु पर्थ्यो ।त्यो पनि राम्रो भएमा मात्र बज्थ्यो।त्यतिबेला रेडियो, टिलिभिजन तथा पत्रपत्रिकामा आउनु भनेकै ठूलो कुरा हुन्थ्यो । अहिले त प्रशारणका लागि एफएम, टिभी, अनलाइन धेरै माध्यमहरु छन् ।
नेपाली गीतसंगीतका क्षेत्रमा अहिले र पहिलेको अवस्था बीच तुलना गर्दा ?
प्रविधिको विकासले अहिले धेरै सहज भाएको छ ।पहिलेपहिले प्रविधिको विकास भैसकेको थिएन । पहिला आवाज मात्र सुनिन्थ्यो, रेकर्ड पनि आवाजको मात्र गरिन्थ्यो तर अहिले आवाजको फोटो रेकर्ड गरिन्छ, गीत सुन्ने मात्र हैन, हर्ने पनि हो, अहिले हेर्दै सुन्ने समय छ ।
गीतसंगीतमा सबै भन्दा गाह्रो पक्ष के हो ?
गीतसंगीतमा सबै पक्ष गाह्रो हुन्छ नजान्नेलाई जान्नेलाई सबै सहज हुन्छ तर सहजता सिकाईमा निर्भर रहन्छ, संगीत सिकिरहने कुरा हो यसको कुनै अन्त्य हुदैन ।
नेपाली गीतसंगीतका क्षेत्रका निकै नयाँ अनुहारहरु देखा पर्छन तर निरन्तता भने दिन सक्दैन्न नि किन होला ?
यो ब्यक्ति अनुसार भर पर्छ । कसैको रुचि मात्र हुन्छ ।यहि हो भनेर भन्न सकिदैन।
अहिले गीतसंगीत भन्दा पनि म्युजिक भिडियोलाई मात्र बढि प्राथमिक्ता दिइने गरेको छ ? यसमा तपाईको विचार ।
यो समयको माग पनि हो, भिडियो मात्र राम्रो भएर हुदैन एउटा गीत राम्रो हुन, शब्द, संगीति, स्वर, भिडियो सबैको कुराको राम्रो समाजस्यता हुनु आवश्यक हुन्छ ।केवल एउटा पक्ष मात्र राम्रो भएर हुदैन ।
स्टेज पर्फम गर्दा केके कुरामा बढि ध्यान दिनु हुन्छ ? कारण ।
टेक्निकल्ली भन्नु पर्दा मुख्य भनेको साउन्ड हो, पर्फमेन्सबाट हेर्ने हो भने दर्शकलाई नै बढि ध्यान दिनु आबश्यक छ उनीहरुलाई मनोरञ्जन भएको छ कि छैन ।
तपाईको शब्दमा एक्स ब्यान्ड कस्तो ब्यान्ड हो ?
यो फोल्क रक ब्डान्ड हो बिशेषता भन्नु पर्दा आशावादी र यथार्थवादी ब्यान्ड हो ।
तपाईहरुको भाबि कार्यक्रमहरु के के छन् ?
हामी अहिले केहि दिन पछि युरोपको १ महिने म्युजिकल टुरमा निस्कदै छौँ ।म्युजिकल सो स्विजरल्याण्ड, हल्याण्ड, बेल्जियम, पर्चुगल, जर्मनी र फान्समा हुने निश्चित भएको छ ।
अन्तमा सबै दर्शक श्रोताहरुलाई के भन्न चाहानु हुन्छ ?
सबै नेपालीलाई यो नयाँ बर्ष २०७०सालको मंगलमय शुभकामना दिँदै भडास हरेक नेपालीले सुन्नै पर्ने एल्बम हो । त्यसैले सुनिदिनुहोस र आफ्नो देश, एतिहास र संस्कृतिको बारेमा समेत केहि शिक्षा लिनुहोस् भन्न चाहान्छौँ।
Views : 3619 | Date : 2013-04-13